gvSIG njengenye indawo komasipala - i-Geofumadas
gvSIG njengenye indlela kamasipala
Mashi, 2009 Geospatial - GIS, I-GvSIG
Leli sonto ngizoba nomhlangano wezobuchwepheshe weProjekthi ocabangela i-gvSIG njengenye indlela yokusebenzisa omasipala lapho benza khona uhlelo lwe-Territorial Ordinance oluhlanganisa ingxenye ye-Central America.
Kakade e-Latin America okuhlangenwe nakho okuhlukile kuzwakala ekusetshenzisweni kwe-gvSIG, kulokhu ngingathanda ukukhuluma ngenye yezenzakalo eGuatemala, mhlawumbe owokuqala esifundeni saseCentral America.
Ukuhlelwa kokuhlangenwe nakho kufanele kube yinye yamathuluzi angcono kunazo zonke i-gvSIG engayisebenzisa ukusabalalisa nokuthuthukisa leli thuluzi ngoba ngeke likhululeke kunoma yimuphi umasipala. Kukhona izindleko hhayi kuphela ekusebenzisweni kodwa futhi nokusimama ngenxa yobuthakathaka obuningi bomongo waseLatin America, ohluka ezweni kodwa ngokuvamile ehlukanisa phakathi kokulinganiselwa komnotho komasipala nokungazinzi kwemithombo yabantu ngenxa yokusetshenziswa okulinganiselwe kwezinqubomgomo zokugqugquzelwa imisebenzi yomphakathi Kubonakala sengathi ukusebenzisana ngamazwe kungadlala indima ebalulekile kulokhu, njengoba ngishilo lelo dokhumenti, okwamanje kubonakala sengathi ayitholakali.
Mhlawumbe okubaluleke kakhulu kulokhu okuhlangenwe nakho eSacatepéquez kungukudalwa kwezinsimbi ezingasiza, kungaba ukuphindaphinda noma ukuthuthukiswa. Kubekwe eceleni kuwebhu ye-gvSIG medium age kodwa yamanje ngokwemisebenzi yabo, isethulo eyenziwe nguFabián Rodrigo Camargo ku-3as. Izingqungquthela ze-GvSIG zikaNovemba ku-2007 lapho ibonisa imiphumela etholakala kule phrojekthi eGuatemala.
Ukwengeza, kusukela kulokhu okuhlangenwe nakho, uCamargo ubuyele emphakathini isethulo esifanelekayo ukufundisa inkambo ye-gvSIG, okungaba yinto enhle yokusizana nencwadi lapho ufundisa inkambo, Ngayisebenzisa. Futhi kufaka phakathi amabalazwe kanye nedatha edingekayo ukwenza imisebenzi yokuzivocavoca.
Le phrojekthi yayisekelwa yiKhwama le-Andalusian of Municipalities for International Solidarity, ne-Association of Municipalities of Sacatepéquez, eGuatemala. Ngokuqinisekile kwakuwusizo, uma kungenjalo ngesikhathi, okwakwenziwa nguMoisés Poyatos, eduze ne-100, omasipala abahlala bevela eGuatemala kumsebenzi weDemocratic Municipalities futhi ngithemba ukuthi ngizokhuluma ngenye isikhathi.
Kungukuhlelwa kwezinqubo noma okuhlangenwe nakho okungakwandisa impilo yemizamo eyenziwe, isifingqo esihlakaniphile esibonisa indlela esetshenzisiwe ngayo, nakuba kufanele futhi kube nzima ngenxa yalokho okwakungu-GvSIG 1.1 okwamanje izinto eziningi ezihlanganisiwe. Ukuze unike isibonelo, ukwenza ngezifiso i-Reference System, kungenzeka kusuka ku-1.3 nakweGuatemala, ine-SRS yayo, nakuba ikhona 1.9 I-coconut isaphazamisa ezinye ohlwini ngoba kubonakala sengathi ukulahlwa kwedatha kwimibono akuhambisani.
Ukuqaliswa kwesofthiwe yamahhala ekuphathweni komphakathi emazweni asathuthuka kuyindlela yokusebenza kanye neyezomnotho.
Iyanciphisa "igebe lobuchwepheshe", elihlangene nezinye izici ezithinta ukuthuthukiswa.
UFabián Camargo - GIS Consultant
Ngifingqa iziphetho, ezibonakala zinembile futhi zisebenza namhlanje ... futhi ngubani owaziyo uma eminyakeni eminingana.
Ukuqaliswa kwe-GIS emazweni asathuthuka kuyisidingo salo kanye nesidingo esiqhubekayo sezinhlangano zokubambisana zokuthuthukiswa kwamazwe ngamazwe
Ukuba khona kwe-GIS kumasipala kudonsela abacwaningi futhi kunikeze izinzuzo kunkampani yangasese eyenza imisebenzi yomphakathi.
Ukuqeqesha kubalulekile ngaphambi nangesikhathi sokuqalisa ukusebenza kwe-GIS
Isofthiwe yamahhala igcina ukulinganiselwa kwezomnotho ekuthengeni kwamalayisense
Imiphakathi yomsebenzisi, uhlu lwamakheli, njll. imelela ukusekelwa kwezinhlangano ezifuna lapho kuqaliswa isofthiwe yamahhala
Nakuba i-GIS kula mazwe incane, kusukela ekuqaleni kufanele ibheke indlela yokwakha ingqalasizinda yedatha (SDI)
Ukukhona kwedatha kwamanye amafomethi kuyakudingeka, nakuba kungalungile ikhwalithi ye-cartographic kucebile kakhulu kulwazi lokubhekisela.
Izinsuku ezizoba ngoSepthemba kulonyaka e-Argentina yimiphumela yemiphumela e-Latin America, ehambisana nemizamo efana Venezuela kodwa mhlawumbe ukuthi kulo nyaka enye yeziphakamiso zomcimbi kuyoba ukudala izenzakalo kwezinye izindawo zezwekazi lapho kukhona kakade imbewu abanye abashiye. Futhi nakuba sekukhona izinsuku (ezisemthethweni noma ezingakahleleki), usuku eGuatemala olunamandla aseCentral American, eCaribbean naseMexico ngonyaka we-2010 ngeke lulimale.
Lapho ngikutshela ngomzamo abafana abazokwenza, ukuthi ngenxa yokuthi ngiyazi okuningi ngokuzinikezela kwabo kanye nekhono lami ngiyazi ukuthi bangenza indima enkulu nge-gvSIG. Lapha bayakwazi landa ukunikezwa kwe-Camargo.
Thumela Previous«Langaphambilini Ukuhumusha i-gajos kuya ku-Geosmoke
Post Next Amagama weProjekthi ye-AutoCAD 2010Olandelayo "
Izimpendulo ze-4 kuya ku- "gvSIG njengenye indawo kamasipala"
Ngacabanga ukulinganisela ukuphawula, kodwa umuntu, kulezi zinsuku kufanele uthole amahlaya amahle ngisho naskripthi.
Kwenzekani kubo bayabhema noma yini ebukeka njenge-popo
amadodana wesifebe esikhulu
Ngiyabonga nge-Alvaro yedatha, namhlanje nje bengingxoxo noMoisés, futhi banephrojekthi esekelwa yi-European Union lapho bezosebenzisa i-gvSIG okungenani komasipala be8 enyakatho yeHonduras. Okwamanje basebenza ekwakhiweni.
Kwi-4as Jornadas, ye-2008 eyedlule, kube nomunye umbono ngephrojekthi "ooMasipala beDemokhrasi" eGuatemala, enikezwe uWalter Girón noMoisés Poyatos.
Ungabonisana nesethulo kanye nendaba mayelana nayo:
I-gvSIG iqala ukukhuluma okuyiqiniso eLatin America, ngokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu emazweni afana neVenezuela, Guatemala, Argentina, Brazil, Colombia ... ngethemba lokuthi i-1st GvSIG Conference eLatin America, lo nyaka uzohlelwa e-Argentina, iphuzu lokuhlangana kwabo bonke futhi ukuqaliswa komphakathi waseLatin America onamandla.